Lufthansa si na Munich gaa Tallinn na Newcastle
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Estonia » Lufthansa si na Munich gaa Tallinn na Newcastle
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ gbasara Estonia • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Lufthansa ga-efega mba Europe ọhụrụ abuo n’oge oyi a. A ga-enye Tallinn, isi obodo Estonia site na Munich na nke mbụ ya, malite na 4 November 2019. Newcastle dị na ugwu ọwụwa anyanwụ England ga-agbaso na 3 February 2020. Ebe abụọ a ga-arụ ọrụ site na Airbus A319.
Site na ebe ọhụụ ọhụrụ a, anyị na - aga n'ihu na - agbasawanye netwọọdụ okporo ụzọ anyị na Europe. Anyị na-enye ndị ahịa anyị ebe abụọ ọzọ na-atọ ụtọ maka ndị njem na-enyekwa ndị njem nlegharị anya, ”ka Wilken Bormann, onye isi ụlọ ọrụ Hub Munich na-ekwu.
Dịka ọmụmaatụ, Tallinn, na-egosipụta obodo ochie ochie mara mma: ebe akụkọ ihe mere eme ya bụ ebe ọdịbendị ọdịnala UNESCO kemgbe 1997. A na-ahụta isi obodo Estonia dị ka otu n'ime isi obodo ochie mara mma nke Baltic na ọ bụ ebe ọdịbendị nke mba ahụ. Mana Tallinn bukwa obodo kacha ike na Estonia. Tinyere ihe ndị ọzọ, ọ bụ ụlọ akụ kachasị ukwuu na steeti Baltic. Lufthansa ga-efega n'isi obodo Estonia ụbọchị Mọnde ọ bụla, Tọzdee na Satọdee ka ọnwa Nọvemba 4 dị.
Newcastle upon Tyne bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụgbọ njem dị mkpa na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ England. A na-ahụkwa obodo ahụ dịka ebe ewusiri ike na nka na sayensị. Newcastle bụ ezigbo mmalite maka nleta n'ọtụtụ ogige mba na njem maka njem site na mgbago ugwu England. Otu ihe pụrụ iche mma bụ Alnwick Castle, nke rụrụ ọrụ maka ọtụtụ ihe nkiri Harry Potter. Site na 3 February 2020, ndị njem ikuku ga-enwe ike iru obodo ukwu Bekee na-anaghị akwụsị na Munich kwa ụbọchị ma Satọde.
Ndị agha Eswatini na-elekọta ebe okwu SADC nwere ike ịbụ ...
Delta Air Lines na-agbakwunye ụgbọelu 36 nke Airbus na Boeing iji ...
Seychelles Isi Secretary maka Tourism onyinye ...
Minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na Jamaica na -agba ndị ọrụ njem ume ka ha nweta ...
Hotellọ nkwari akụ zuru ụwa ọnụ na-achọ oke ọgụ na-akwụ ụgwọ
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na The Bahamas na July
Nkwupụta nke onye isi oche nke African Union ...